Ngwa AMP nwere ịgụ IVW n'ịntanetị - IG
AMP ngwa mgbakwunye na nkwado IVW na-agụta ntanetị
Onye na -emepụta Accelerated Mobile Pages (AMP) iji mepụta ibe Google AMP , plugins AMP na onye na -emepụta mkpado AMPHTML na -eweghara ntọala IVW na akpaghị aka site na akara SZM nke weebụsaịtị gị iji gụọ IVW iru!
Mbugharị mkpado IVW SZM
Accelerated Mobile Pages Generator na -achọpụta data IVW na akpaghị aka site na mkpado SZM nke ibe mbụ wee gbakwunye data a na ibe AMP nke ya. N'ụzọ dị otú a, a na -anabata ọnụọgụ IVW dị adị nke na -enye ugbu a maka ibe mkpanaka ngwa ngwa yana, dị ka ọ dị na mbụ, agbakwunyere na ntanetị IVW site na ntanetị dị ugbu a. Nke a pụtara na enweghị ọghọm dị na ọnụọgụ IVW!
Ihe ngwangwa nke Accelerated Mobile Generator na-enyocha mkpado nke IVW SZM na peeji nke mbụ wee weghara usoro ndị a maka ibe AMP:
(" st ": "... xyz ...") IVW na -enye njirimara
(" co ": "... xyz ...") Nkwupụta mkpado IVW
Nweta ndepụta mpaghara maka saịtị AMP:
Ka ekenye nleta na PI nke ibe AMP n'ụzọ ziri ezi na ntanetị IVW nke gị, ekwesịrị itinye akara ndị a na ndepụta mpaghara na akaụntụ IVW gị (www.INFOnline.de):